Vaovao: mitsidika fo mafana ny mpiara-miasa amin'ny orinasa Spring Festival
Ny mpiara-miasa amin'ny orinasa Spring Festival dia mitsidika fo mafana
Amin'ny fetin'ny Lohataona, mba hahatsapan'ireo olona manokana ao amin'ilay orinasa ny fikarakaran'ny orinasa, ary hiaina ny andro vaovao sy milamina, Wang Xiaodong, mpitantana jeneralin'ny Chengfeng Pharmaceutical Packaging, ary mpikambana ao amin'ny mpitarika dia nankany amin'ny fianakavian'ireo mpiara-miasa manokana amin'ny orinasa handefa fiaraha-miory.
Fitsidihana fiaraha-miory, mpitarika ny fonosana fanafody ChengFeng pitsopitsony momba ny fiainam-pianakaviana mpiara-miasa manokana sy ny tena olana manokana, ary nilaza tamin'izy ireo hoe inona ny olana sy ny olana azo taratry ny orinasa amin'ny fotoana rehetra, tokony hikarakara tsara ny fiainanao manokana sy hamporisika azy ireo mitazona ny toe-tsaina feno fanantenana ka hiatrika ny fiainana amin'ny lafy tsaran-javatra, amin'ny tsodrano fialan-tsasatra mialoha.
Na dia tsy lafo aza ny fiaraha-miory, fa ity "fitiavana" ity no fanomezana mafana indrindra alohan'ny Fetin'ny Lohataona, tsy ny mpiara-miasa manokana mafana ihany, fa ny mamela ny mpiara-miasa hankafy ny fikarakarana sy ny hafanan'ny mpitarika ny orinasa koa.
Tena nampihetsi-po i Cao Huiying ary nilaza hoe: “Mihevitra ahy foana ireo mpitarika ny orinasa. Mihevitra ahy foana izy ireo rehefa misy zavatra tsara. Miahy antsika izy ireo ary maneho fangorahana amin'ny alohan'ny Fetin'ny Lohataona.
Ianao no nieritreritra ahy, avelao hanafana ny fonay tokoa.
Tsy haiko izay holazaina, fa hiasa mafy aho hanomezana fahafaham-po ny orinasako sy ny tenako… ”
Tamin'ny alàlan'ny fitsidihana alohan'ny Fetin'ny Lohataona, ireo mpiara-miasa amin'ny orinasa fonosana ara-pahasalamana Chengfeng amin'ny ririnina mangatsiaka hahatsapa ny hafanana sy ny fikarakarana, mba hahafahan'ny fianakaviana manokana manatratra ny taona vaovao, hampiroborobo ny firindrana sy ny fitoniana eo amin'ny orinasa.
Fotoana fandefasana: Dec-20-2020